Deg deg: Gudoomiyaha Barlamanka oo Muqdisho kulana la leh Taliyaha Ugandha – SBC
Deg deg: Gudoomiyaha Barlamanka oo Muqdisho kulana la leh Taliyaha Ugandha
Gudoomiyaha baarlamanka KMG Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa saaka si lama filaan ah uga soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, isagoo amaankiisa aad ay u adkeeyeen ciidamada AMISOM ee midowga Afrika ka socda ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Imaanshaha Shariif Xasan ayaa la soo sheegayaa in uu ahaa mid aan saxaafada loo sheegin, isla markaana si hoose xubno xildhibaano ah oo ka tirsan Baarlamanka, kuwaasi oo ay isku fikir yihiin gudoomiyaha loogu sheegay imaanshihiisa kuwaasi oo garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey.
Imaanshaha Gudoomiyaha ayaa ku soo aadaya xili ay Muqdisho ay ku sugan yihiin saraakiil ka socota taliska ciidamada Ugandha, iyadoo amaanka gudoomiyaha si weyn loo adkeeyey ilaa la geeyey gurigiisa, waxaana guriga la dhigay ciidamo dheeraad ah.
Sababta sidan aan caadiga aheyn loogu adkeeyey amaanka gudoomiyaha ayaa lagu macneeyey iyadoo laga cabsi qabo in dadweynaha ka careysan heshiiskii Kampala ay waxyeelo naftiisa gaarsiiyaan ama ay ku banaanbaxaan.
War hada na soo gaarey ayaa sheegaya in kulan alabaabadu u xiran yihiin uu u socdo Taliyaha guud ee ciidamda Ugandha Jeneral Aronda Niyakrima, kulanka labada nin ayaa yimid wax yar uun ka dib markii uu ismari waa ku soo dhamaadey kulan dhexmarey Ra’isalwasaare Farmaajo & Jen. Aronda Niyakrima iyadoo wararku sheegayaa in Gudoomiyaha Baarlamanka uu ka codsadeyJen. Aronda Niyakrima in aanu ka tagin magaalada Muqdisho ilaa xilka uu iska casilo Ra’isalwasaare Farmaajo.
Kulanka ayaa wali socda wixii ku soo kordhana kala soco SBC daqiiqad daqiiqad.